L'atelier de fabrication SOATAO | Le Relais Madagascar
Iza ary izahay ?
Ny sehatr'asa misy
Toerana fifantenan-damba TARATRA
Sampan'asa fanamboarana fiarakodia sy ara-mekanika SOATAO
Zaitra famoronana GASH'MLAY
Fampandrosoana ara-pambolena AINGAVAO
Tahiry Ifanampiana Andavanandro TIA
Fanangonana sy fanomezan-danja ny fako FAKOFIA
Zaitra famoronana sy toeram-pivarotana
Zezika & vokatra azo avy amin'ny fanodinana akora efa niasa
Fantaro ihany koa
Rejoignez l'équipe LE RELAIS.
Nouvelle offre d'emploi LE RELAIS MADAGASCAR - Recherche UN responsable technique et DES maintenanciers
Toutes nos offres sur www.lerelais.mg à la rubrique offre d'emplois.
Miara-miasa amin'ny birao fikarohan'ny Relais Madagasikara, ireo sehatr'asa fanamboarana misy ato aminay dia afaka manatanteraka ireo asa ilainareo rehetra araka ny fari-pahaizanay. Izahay dia voahofana manokana amin'ny "chaudronnerie", "usinage", sy ny fanamboarana ireo "matériaux composites" ary koa ny fametrahana ireo kojakoja rehetra amin'ny orinasa.
Ny sehatr'asa "Tôlerie" dia efa manamboatra ireo karazan'asa vita amin'ny vy "mécano- soudés" rehetra. Izahay dia manana fitaovana fanaovana "soudure" maromaro manaraka ny teknolojia MIG/ MAG, TIG, "Soudure à l'électrode", "Soudure oxyacétylénique", "Oxycoupage". Mikirakira vy alalan' ny fitaovana manokana ihany ko izahay : "cisailles", "plieuses", "encocheuses", "presses", "poinçonneuses" sy "perceuses", ahafahana manatanteraka ny asa tena sarotra.
Ny sehatr'asa "Fabrication Mécanique" dia afaka mamboarana ny asa rehetra araka ny fangatahanareo. Manana "tours mécaniques" sy "fraiseuses universelles" manara-penitra izahay.
Ny sehatr'asa "stratification" dia manome tolotra ho anareo ny fahafahany manatanterahany ireo piesy kely na lehibe indrindra amin' ny alalan' ny teknôlôjian'ny "matériaux composites". "Fibre de verre" sy ny "résine polyester" no tena fampiasanay.
Ny sehatr'asa "capitonnage" dia manao ny karazana fanaka rehetra anisan'izany ny sezan' ny fiara.
Ny sehatr'asa "maintenance" dia manao ireo fametrahana kojakoja famatsiana herinaratra amin'ny orinasa sy ireo asa ara-mekanika.
Raha mila fanampim-panazavana na te-hahazo devis dia antsoy ny laharana : 00261(0)34 75 510 14
na koa manorata amin' ny adiresy: info@karenjy.mg